Ma xiisaysaa ganacsiga? Laga yaabaa in aad hadda ka horba hayso fikrad ganacsi oo aad jeclaan lahayd in aad horumariso. Ka fekerka wax ku saabsan bilaabida ganacsigaaga? Markaa Bilowga koorso Ganacsi ayaa adiga kugu habboonaan lahaa. Waxaanu ku siin karnaa xirfadda iyo taageerada aad u baahantahay si aad u tijaabiso fikrada ganacsi oo aad u abuurto qorshe ganacsi oo mustaqbalka ah. Kaalay oo anaga nala qaad tallaabada u horaysa!
Wax ku saabsan Bilowga koorso Ganacsi
Inta kooraska lagu jiro waxaa lagu siin doonaa taageerada iyo hagidda horumarinta fikrada ganacsigaaga iyo qorshaynta qaorshahaaga ganacsi. Sidoo kale waxaa lagu bari doonaa xirfado dhigaal ah iyo kuwo farsamo ah oo aad u baahantahay si aad u bilowdo ganacsigaaga. Markaad dhammayso kooraska waxa aad u baahantahay in aad go’aansato haddii aad sii wadanayso qorshahaaga ganacsi oo aad qaadayso tallaabada u horaysa xaga bilaabida shirkadaada. Koorasku waa mid wakhti buuxa leh oo waxa uu ku dhammaadaa 4-16 wiig. Si wada jir aha ayaanu u qorshaynaa qorshaha tababarka ee waafaqsan baahiyaha shakhsiyeed iyo aqoontii hore.
Muxuu koorasku kuu hogaamiyaa?
Koorasku waxa uu ku siin doonaa adiga sawir ka cad waxa ay tahay macnaha bilaabida iyo waddida ganacsi. Markaad dhammaystirto koorsada waxaad u baahantahay in aad go’aansato haddii aad sii wadayso qorshahaaga ganacsi.
Shaqa doonka ka diiwaan gashan Arbetsförmedlingen (Adeega Shaqadda ee Dad waynaha). Kooraska waxaa loola jeedaa dadka xiisaha u haya bilaabida shirkad cusub.
Koorsadu aday kugu koobanyahay, shuruudahaaga, kartiyahaaga iyo baahiyahaaga.
Hogaamiyayaashayada koorasku waxay leeyihiin sanado badan oo khibrad ah oo ah bilaabida iyo waddida ganacsiyada.
Kooraskayagu waxa uu helaa natiijo!
Cutubyada waxaa ku jira:
Laga bilaabo fikrad ilaa ganacsi Waxaanu kaga hadalnaa arrimaha sida: Keenida fikrad ganacsi iyo abuurista qorshe ganacsi, “Noqoshada ganacsade”, ganacsiga iyo noocyo kala duwan oo bilaabida shirkad ah, iwm. Suuq gaynta ganqacsiyada yar yar Waxaanu kaga hadalnaa arrimaha sida: Summadda, xayaysiinta, iibka cilmi baadhida suuqa, baadhitaanka suuqa iyo macmiilka, baadhitaanada tartamaha iyo daryeelka macmiilka.
Dhaqaalaha ganacsigaWaxaanu kaga hadalnaa arrimaha sida: Heshiisyada, qiima goynta, maaliyada iyo shuruudaha ganacsiga bilowga ah iyo noocyada maal gelinta.
Maamulka ganacsiWaxaanu kaga hadalnaa arrimaha sida: Cashuurta, xisaabaadka Cashuurta Qiimaha la Dulsaaro, lacag qabashada, diiwaangelinta ganacsiga iyo caymiska.
KaleSidoo kale waxaad baran doontaa ganacsiga internatka tooska ah, la wareegida hawl galo jiray, sinaanta lab iyo dhedig iyo kala duwanaanshaha, deegaanka shaqada iyo arrimaha deegaanka, siiba iskaa u shaqaysiga.